Pike sy ny vatony mandoko ny tantara an-tsary Marvel ... Famoronana an-tserasera
Ny mpanao endrika sy cosplay mafana fo Kay Pike dia mampiasa sary hosodoko, toa an'ity artista ity, ho lasa ny Marvel Comics izao tontolo izao tarehin-tsoratra. Ity sary hosodoko ity dia aingam-panahy avy amin'ny sarin'i Spiderman, Deadpool sy ny maro hafa izay fantatry ny besinimaro tsara ary hitantsika tamin'ny efijery lehibe tato anatin'ny taona vitsivitsy.
Mampiditra aloka izy ary tsipika izay mametra ny endriny tahaka ny hitantsika amin'ny tantara an-tsary ao amin'ny vatany toy ny hoe izy dia toetra amam-panahy amin'ny sariitatra manaitra azy. Ny illusion azo dia tena mendrika hoderaina ka amin'ny voalohany dia mieritreritra isika raha tena miatrika vehivavy tena izy na iray amin'ireo maherifo Marvel.
Pike dia manana Tonga tany amin'ny fivoriambe tantara an-tsary maro mivarotra ny tsipika fiakanjony manokana, Canada Cosplay, efa an-taonany maro izao. Ny Cosplay dia fomba iray nahafahana nifanerasera sy nankafy ireo fivoriambe ireo tamin'ny fomba hafa, ankoatry ny zava-misy fa tao amin'ilay singa psikolojika dia tsara tokoa ny mahatsapa ny iray amin'ireo maherifo ankafizin'izy ireo.
Cosplay dia ampahany lehibe amin'ny fiainan'i Pike, saingy ny olana ara-pahasalamana dia nahatonga azy tsy maintsy nitady fomba hafa hanohizana ny fitiavany. Izany olana izany dia misy ifandraisany amin'ny vanin-taolana fanabeazana aizana ao amin'ny valahany izay tsy mamela azy hipetraka mandritra ny ora maro, zavatra iray tena ilaina amin'ny cosplay. Noho izany, ny fahitana ny tenany amin'ny mpilalao tiany indrindra noho ny hosodoko dia namela azy hanohy ny fitiavany.
Pike dia azy matetika fantsona ao amin'ny Twitch y ao amin'ny YouTube, ka raha mijery ianao hevitra adala ho an'ny fety na fivoriambe tantara an-tsary, aza adino ny fotoana nifanarahana ary mandehana amin'ny fantsona ataon'izy ireo. Ny maherifo mety ho hitantsika mitafy ireo loko amin'ny vatantsika ireo manokana toy ny an'ny Spiderman's.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ireo endri-tsoratra Marvel tsy mampino amin'ny Body Painting
Misaotra Mariano! Ary amin'ny alàlan'ny rohy. Miarahaba anao!